Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Isiqingatha sabahlali base-UK baceba iihambo ezininzi kulo nyaka uzayo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Urhwebo belunika ingxelo ngemfuno exhaphakileyo yokunyuka yokuhamba kulo lonke ubhubhane kwaye oku kubonakaliswe ngokunyuka kwamaxabiso okubhukisha ngalo lonke ixesha izithintelo zithotywa.
Isiqingatha seBrits sicwangcisa iiholide ezimbini okanye ngaphezulu ngo-2022 - kwaye i-70% iceba ukuthatha iholide enye ubuncinane kunyaka ozayo, ngokophando olukhutshwe namhlanje (1 Novemba) yi-WTM London, isiganeko esikhokelayo sehlabathi kushishino lokuhamba.
Ngaphaya koko, abathengi abane kwabali-10 bajonge ukuchitha ngaphezulu kwiiholide kunokuba bebesenza ngo-2019, ityhila iNgxelo yoShishino lweWTM.
Uvoto lwabathengi abayi-1,000 16, olukhutshwe namhlanje eWTM eLondon, lufumanise ukuba i-22% kuphela ayicwangcisi ukuhamba kwaphela, ngelixa i-2022% ithi izakuba neholide enye ngo-XNUMX.
Isahlulo sesithathu (29%) sixelele abavoti ukuba baceba iiholide ezimbalwa - kubandakanywa ikhefu elifutshane kunye neeholide ezinde - ngelixa i-11% ithe banethemba lokuthatha ezintathu. Phantse umntu omnye kwabali-10 (9%) uthe baceba ukuthatha iiholide ezingaphezulu kwezintathu.
Xa kufikwa kwizicwangciso zenkcitho yeeholide, i-43% ijonge ukuchitha ngaphezulu kowama-2019 kwaye ngaphantsi kwesinye kwi-10 (9%) ithe iza kuchitha ngaphantsi kohlahlo lwabiwo-mali luka-2019.
Phantse umntu omnye kwabathandathu (17%) uxelele uphando ukuba baya kuchitha "kakhulu" ngaphezulu kuka-2019 - ngomda we-20% okanye ngaphezulu - ngelixa ikota (26%) iqikelela ukuba baya kuchitha ngaphezulu kancinci - ukuya kuthi ga kwi-20% ngaphezulu kuka-2019. .
Owesithathu uthe baza kuchitha imali elinganayo nangaphambi kobhubhane.
Iziphumo zabathengi zixhaswa luphando phakathi kweshishini lokuhamba kwihlabathi, phantse isiqingatha (44%) seenkampani ezingama-676 ezibuzwa yi-WTM yaseLondon zithi ukubhukisha kwabo kuya kufikelela okanye kudlule amanqanaba abonwe ngo-2019. Isibini kwisihlanu (42%) sithi amanqanaba okubhukisha. kulo nyaka uzayo uzakuba semva ngo-2019, ngelixa i-14% yayingaqinisekanga okanye ingazi.
Uphando luhamba kakuhle ekubuyiselweni komzi-mveliso wokuhamba wase-Bhritane ophuma ngaphandle, ebonisa ukuba kukho imfuno eyomeleleyo ye-pent-up yokuphuma emva kobhubhani njengoko kuthintelwa lula.
Ngokuhamba phesheya kolwandle ngo-2020 kunye no-2021 bengaphantsi kwamanqanaba angaphambi kwe-Covid, uvavanyo lunika ithemba kwiiarhente, abaqhubi kunye neenqwelomoya ukuba ukubhukisha kuya kubuyela umva ngokukhawuleza xa ukuhamba kuba lula.
NgoSeptemba, imibutho yorhwebo ye-Airlines UK kunye ne-Airport Operators Association yaxelela uMphathiswa wezoThutho uGrant Shapps ukuba ihlobo lika-2021 "yayiyihlobo elibi kakhulu kumzi mveliso wethu kunehlobo lika-2020", wongeza ngelithi: "I-UK ishiywe ngasemva ngaphandle kwenkqubo yayo yokugonya ihlabathi. ”
Isikhululo seenqwelomoya saseHeathrow, umzekelo, sabona amanani abakhweli angama-71% ezantsi ngo-Agasti ka-2021 xa kuthelekiswa nenyanga enye yangaphambi kobhubhane.
I-London hub yehla ekubeni sesona sikhululo seenqwelomoya sixakekileyo eYurophu ngo-2019 ukuya kowe-10 njengoko abo bakhuphisana nabo baye babuya ngesantya esikhawulezayo.
Ngaphaya koko, iziphumo ezifunyanisiweyo zifana nezalathi zemarike ezibonwa kwenye indawo - ehlotyeni, uphando lwabathengi be-ABTA lufumanise ukuba ama-41% sele eneholide ebhukishelwe kumazwe aphesheya kwiinyanga ezili-12 ezizayo, kwaye i-35% ibibhukishele iholide yangaphandle kweli hlobo. La manani aphantsi kunesiqhelo kodwa abonisa ukuba imfuno yokuhamba ihlala njani, nangona imozulu inzima.
Kwaye iHays Travel, i-arhente enkulu yokuhamba yase-UK, ibike inzuzo ngo-Agasti, enkosi ngokuyinxalenye kwi-armada yeenqanawa zokuhamba ngeenqanawa ezinikezela ngeeseyile zasekhaya ehlotyeni malunga neBritish Isles.
USimon Press, uMlawuli weMboniso weWTM eLondon, uthe: “Urhwebo belunika ingxelo ngemfuno exhaphakileyo yokuhambahamba kulo lonke ubhubhane kwaye oku kubonakaliswe ngokunyuka kwamaxabiso okubhukisha ngalo lonke ixesha izithintelo zithotywa.
“Nangona kunjalo, ukungaqiniseki kunye nokubhideka malunga nemithetho yokuhamba kuthintele abantu abaninzi abazakuba ngabakhenkethi kude kube ngoku.
"Ngokuthemba ngakumbi malunga nokuvulwa kwemida kunye nokulula ngakumbi kwezithintelo zokuhamba, kujongeka ngathi zonke ezo zicwangciso zeholide kudala zifezekiswa, zinika ishishini ithuba lokubuyela kwimeko yesiqhelo njengoko sibuyela kwiipatheni zokuhamba eziqhelekileyo."